Ahoana ny fanafoanana ny sidina | Vaovao momba ny dia
Ahoana ny fanafoanana ny sidina
Iray amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny fandaminana mialoha ny fialan-tsasatra mialoha ny fitehirizana vola rehefa manofa trano hipetrahana na mividy tapakilan'ny fiaramanidina. Na izany aza, manana fatiantoka ihany koa izy io ary izany dia raha tsy mamela antsika hanatanteraka ny drafitra ataontsika ny toe-javatra iainantsika dia tsy ho afaka hankafy azy ireo isika ary ny fisalasalana amin'ny fomba ahazoana ny vola dia hanafika antsika. Ka raha ny tapakilan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia ahoana no hanafoanana ny sidina karama? Ny valin'ity fanontaniana ity dia miankina amin'ny lafin-javatra maro.
2 Takio ny ampahan'ny hetra
3 Ny antony majeure hery
4 Fiantohana fitsangantsanganana
5 Ahoana raha manafoana ilay kaompaniam-pitaterana?
Ny sidina mandoa dia azo foanana raha toa ka voafidy ny tambin-karama mifanaraka amin'izany, na dia lafo kokoa aza io safidy io. Ho fanampin'izany, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia mety handoa saram-pitantanana ary tsy hamerina ny vola feno azonao.
Raha tamin'ny fotoana nividiananao ny sidina no nisafidiananao ny safidy mora indrindra, dia tena azo inoana fa tsy tafiditra ao anatin'izany ny fahafaha-miverina na mifanakalo. Mateti-pitranga izany amin'ny zotram-piaramanidina lafo vidy.
Takio ny ampahan'ny hetra
Rehefa vidiana ny tapakilan'ny fiaramanidina dia misy ampahany amin'ny saran-dàlana mankany amin'ny Fanjakana ho hetra. Raha sendra tsy afaka misidina dia azo angatahina izany vola izany satria mbola tsy nitranga ny dia. Saingy ao anaty olana iray indray isika: mendrika ny hitakiana ireo sarany ireo sa tsara kokoa ny manadino izany? Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy manonitra ny fitakiana satria tsy maimaimpoana ny fitantanana; indray ny politika fanafoanana dia hampiharina ary mandany vola izany.
Ny antony majeure hery
Raha voatery manafoana sidina ianao noho ny force majeure toy ny fahafatesan'ny havana diplaoma voalohany dia misy ny kaompaniam-pitanterana izay manaiky hanafoana ny sidina efa naloa ary hamerina ny vola (na farafaharatsiny ampahany aminy) amin'ny alàlan'ny fampisehoana ny bokim-pianakaviana sy ny taratasim-pahafatesana. Ny fepetra tsirairay dia azo jerena ao amin'ny tranonkalan'ny orinasa.
Ny hevitra tsara tsy hahafoana ny vola amin'ny tapakilan'ny fiaramanidina raha toa ka tsy afaka manidina farany dia ny maka fiantohana fitsangatsanganana. Ity karazana politika ity dia mazàna mandrakotra ny fanafoanana ny dia saingy tsara ny hamaky ny printy tsara alohan'ny hanapahanao hevitra. Raha ny mahazatra, ny fiheverana fa ny fiantohana fiantohana dia fanafoanana noho ny force majeure toy ny aretina, fiantsoana any amin'ny tribonaly, fahafatesana na antony miasa. Ho very ny vola raha fanafoanana ny dia tsy natao raha tsy misy fanamarinana satria tsy fiheverana hiditra amin'ny politika izany. Noho izany, mba hisorohana ny tsy ampoizina dia tsara ny mitandrina rehefa manao sonia.
Ahoana raha manafoana ilay kaompaniam-pitaterana?
Amin'ireto tranga ireto dia ny orinasa no tsy maintsy mitady vahaolana, na amin'ny famerenam-bola amin'ny mpanjifa na amin'ny famindrana azy amin'ny sidina hafa. Amin'ireo toe-javatra ireo, ny mpandeha misafidy safidy mety indrindra aminy ary mety hanana onitra ara-bola aza. Na izany na tsy izany, araka ny soso-kevitry ny minisiteran'ny fizahantany sy ny indostria, dia tsara ny mitazona tapakila ho an'ny fandaniam-bola azo avy amin'ny fanafoanana, toy ny trano fandraisam-bahiny, sakafo, sns.
Na izany aza, misy tranga telo izay tsy nitandreman'ilay orinasa na inona na inona:
Fampiatoana sidina noho ny antony miavaka, toy ny toetr'andro.
Fampiatoana ny sidina misy fanamarihana roa herinandro sy famindran-toerana ny mpandeha.
Ny fanafoanana noho ny fitokonana dia tsy heverina ho antony miavaka ary manan-jo handray onitra ny mpandeha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Ahoana ny fanafoanana ny sidina
Tanàna manga ao Maroc